» नबिल बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरमा जान छलफल हुँदै, १००ः३५ स्वाप रेसियो प्रस्ताव
नबिल बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरमा जान छलफल हुँदै, १००ः३५ स्वाप रेसियो प्रस्ताव
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:३८
काठमाडौं । नबिल बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्जरमा जाने सम्बन्धमा आज छलफल हुन लागेको एक राष्ट्रिय दैनिकले खुलासा गरेकोछ । जेठ २७ गते प्रकाशित आर्थिक दैनिकका अनुसार आज दुवै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ । सोही बैठकमा बिग मर्जरका लागि छलफल हुन लागेको हो ।
दुवै बैंकको आज एकै दिन सञ्चालक समितिको बैठकमा आपसमा मर्जरमा जाने निर्णय हुन सक्नेछ । नबिल बैंकको १०० कित्ता बराबर एनसीसी बैंकको ३५ कित्ता शेयर अर्थात नबिल र एनसीसी १००ः३५ रेसियोमा शेयर स्वाप गरी आपसमा गाभिने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि यो प्रस्ताव अन्तिम भने होइन, हाल प्रारम्भिक छलफलकै क्रममा रहेकोले उक्त विषयमा सहमति हुने वा भाँडिने अहिले नै एकिन भइसकेको छैन । यसअघि पनि एनसीसी बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्जरमा जाने आन्तरिक छलफल अन्तिम चरणमा पुगेर भाँडिएको थियो ।
धितोपत्र बजारमा एनसीसी बैंकको शेयर मूल्य ३७८ रुपैयाँ रहेको छ भने नबिल बैंकको शेयर प्रतिकित्ता १३०४ रुपैयाँ रहेको छ । हाल नबिल बैंकको चुक्ता पुँजि १३ अर्ब ४८ करोड एक लाख ५८ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ भने एनसीसी बैंकको कूल चुक्ता पुँजि १० अर्ब ३१ करोड ४५ लाख १७ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ । दुई बैंकहरु मर्जरमा गएमा कूल चुक्ता पुँजि २३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख ७५ हजार ८०० रुपैयाँ हुनेछ ।
एनसीसी बैंकलाई स्वाप रेसियो निकै कम प्रस्ताव गरिएकोले सो बैंकका लगानीकर्ता नमान्न सक्ने सम्भावना समेत बलियो रहेको बताइन्छ । मर्जरमा जाने सम्बन्धमा दुवै बैंकहरुले औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यसैबीच, नबिल बैंकका सिईओ अनिल केशरी शाहले आज सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने कुरा सत्य नभएको बताएका छन् । बाहिर हल्ला मात्रै चलेको जानकारी दिएका छन् ।
एनसीसी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक भने आज अपरान्ह ३ बजे बस्दैछ ।
सिटिजन लाइफको ‘सिटिजन लिडर्स नाइट २०२१’ भव्य रुपमा सम्पन्न, उत्कृष्ट लिडर्स सम्मानित
लुम्बिनी विकास बैंकको एकैदिन ५ नयाँ शाखा बिस्तार, ७७ पुग्यो कुल शाखा ?
थप २०५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १ जनाको मृत्यु
पर्यटन बोर्डका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य तथा सामुहिक दुर्घटना बीमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्समा
नेप्सेमा भारी गिरावट आउँदा आज सर्वाधिक गुमाउने कम्पनी
न्यादी हाइड्रोपावरको शेयरमा सकारात्मक सर्किट, अन्य क–कसले सर्वाधिक कमााए ?
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको बार्षिक साधारण सम्पन्न, लाभांश प्रस्ताव पारित
नेप्से ७२ अंकले घट्दा ४ अर्बमा खुम्चियो कारोबार, सबै उपसूचक राताम्य
नेशनल हाइड्रोपावरसहित आज सर्वाधिक कारोबार भएका टप १० कम्पनी
नेशनल हाइड्रोपावरको खुद नाफामा उछाल, इपिएस कति ?
सात प्रदेशमा कार्यक्षेत्र तोकेर १४ वटा लघुबीमा कम्पनीको लाईसेन्स दिन बीमा समिति ‘मुभ’
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको साधारण सभा पुष १३ गते, के–के छन् एजेण्डा ?